हरर फिल्मले दर्शक हसाँयो भने ? | Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal Site
Home / Main News / News / हरर फिल्मले दर्शक हसाँयो भने ?
हरर फिल्मले दर्शक हसाँयो भने ?
— June 11, 20190540
Previous Article एकसाथ देखिँदै अक्षय कुमार र कार्तिक आर्यन
Next Article बिष्णु र टिकाको "स्वर्गकी परि" (गीत)
फिल्मी फण्डा । प्रकास सपूतको गीत गलबन्दी २०४८ सालमै रेकर्डिङ गरिएको गायक शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो’ सँग लय मिल्न गएको आरोप लागेको छ । गीतलाई लिएर शम्भु राईले मुद्दा हालेका छन् । जसमा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यलयले छलफलमा कुरा मिलाउन बुधबार सम्मको समय दिएको छ । अझ जातिय विषयलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका…
फिल्मी फण्डा । वर्षा राउत अभिनित फिल्म दाल भात तरकारीले राजधानीका तीन सिंगल थिएटरमा प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाएको छ । उनी अभिनित अर्को फिल्म जात्रै जात्रा पनि मल्टिप्लेक्स हलहरुमा पनि प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाउने रफ्तारमा छ । समीक्षकको नजरमा नरुचाइए पनि दाल भात तरकारीले प्रदर्शनको ५१औँ दिनको सफलता प्राप्त गर्यो । फिल्ममा अभिनय गरेकै…
फिल्मी फण्डा । राजधानीका तीन सिंगल थिएटरमा प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’का नायक पुष्प खड्का र नायिका आँचल शर्मालाई एउटा फिल्मबाट पर्दामा दोहोरिन अफर आएको थियो । तर, आएको अफर उनीहरुले छाडे । अफर आएको फिल्मको लागि पुष्पले ३० लाख पारिश्रमिक मागेका थिए । तर, दुबैले फिल्मको कथा राम्रो नलागेर छाडेको बताए ।…
मिश्रित प्रतिक्रियासँगै ५१ दिन मनाउन सफल ‘दाल भात तरकारी’
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ले मिश्रित प्रतिक्रियासँगै ५१ दिन मनाउन सफल भएको छ । फिल्म युनिटले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्म ५१ दिनको सेलिब्रेसन गरेको हो । फिल्मले गोपीकृष्ण, अष्टनारायण र गुण सिनेमा गरी ३ हलमा ५१ दिन मनाएको हो । फिल्म युनिटले कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्राविधिकलाई बोनस र प्रमाण पत्र प्रदान…
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गीत हो गलबन्दी । धेरैले रुचाईएको गीतको रुपमा मात्र हैन गीतका सर्जक प्रकास सपुतलाई लागेको चोरीको आरोपले पनि चर्चामा छ । धेरैले प्रकाशको प्रगतिले जलेर यो आरोप लागेको भनेका छन् भने केहीले गल्ती गरे कि क्या हो भनेका छन् । नेपाली ग्रामीण समाजमा गाइने रोधी परम्परामा आधारित उक्त…
हिरो र भिलेन बीचको टक्कर हराएको फिल्म
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय रजतपटका नायक पात्रहरू मुक्काको भरमा एक्लैले १० जना भिलेनलाई ढाल्न असमर्थ छन् । न उनीहरू नायिकासँग प्रेमिल वातावरणमा गएर गीतमा नाच्छन् । न पहरामा गएर दशौँ पटक आउने प्रतिध्वनि निकाल्ने गरि चिच्याउँछन् । नेपाली गाउँ–शहर र चोक–गल्लीमा भेटिने पात्रहरूको जीवन्त अभिनय गर्छन् । वनावटी अभिनयको साटो परिचित जस्तो लाग्ने पात्रको…
विराजको डेब्युमा विवादै विवाद
फिल्मी फण्डा । विराज भट्टको निर्माण तथा डेब्यु निर्देशनमा तयार भैरहेको फिल्म ‘साङ्लो’को छायाकंन भइरहेको छ । निर्माणको लागि टिमअप गदैगर्दा विराज विवादमा आएका थिए । गत वैशाखमा फिल्मका प्राविधिक शंकर पाण्डे र उनीबीच हात हालाहाल भएको थियो । चलचित्र प्राविधिक संघको मध्यस्थतामा पाण्डे र भट्टबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा भट्टले गल्ती महसुस…
महँगो पारिश्रमिक सस्ता कलाकार
फिल्मी फण्डा । रजतपटका कलाकारहरुको पारिश्रमिक कति होला ? बजारमा अनेकन हल्ला फैलाइन्छ । पारिश्रमिकको ग्राफको राम्रै चर्चा हुने गर्दछ । बाहिर हल्ला गर्ने एक थरि रकम हुन्छ अनि वास्तविक पारिश्रमिक अर्कै हुने खबर पनि समय समयमा नआएको होइन । रजटपटका नायकको हकमा पारिश्रमिक ४०–५० लाख र नायिकाको हकमा १५–२० लाखसम्म पारिश्रमिक बुझेको खबर आउँछन् । फिल्मको…
“रातो टिका निधारमा”को छायाँकन सम्पन्न
फिल्मी फण्डा । फिल्म “रातो टिका निधारमा”को छायाँकन सकिएको छ । गत वर्षको दशैँको छेको पारी रिलिज भएको फिल्म ‘जय भोले’ मा अशोक शर्माको निर्माण तथा निर्देशन रहेको थियो । फिल्म युनिटले गत वर्ष नै ‘रातो टिका निधारमा’ को अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिएका थिए भने दशैँमा रिलिज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।अब भने अशोक शर्माको नै…
दुई नेपालीलाई तीन बलिउड फिल्मले घेर्दै
फिल्मी फण्डा । यस बर्ष गत बर्ष भन्दा कम मात्रामा फिल्म प्रदर्शनमा आउने निश्चित छ । शुटिङ सिजनमा पनि कम मात्रामा कम फिल्महरु फ्लोरमा रहेका छन् । नेपाली फिल्मको संख्या कम हुँदा विदेशी फिलमको दबाब नेपाली फिल्मले प्रदर्शनको समयमा झेल्नु पर्नेछ । विदेशी र स्वदेशी फिल्मको क्ल्यासको दिन आगामी साउन ३० लाई मानिएको छ । फिल्म…
जस्तो प्रचार त्यस्तै व्यापार
फिल्मी फण्डा । जेठ ३१ गते देखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म थियो प्रेम दिवस । जसमा विवाह गर्ने तयारी गरिरहेका जोडी अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई हेर्न दर्शक हलसम्म पुगेनन् । फिल्मलाई लिएर निर्माण टिमले उतिसाह्रो प्रचार–प्रसार पनि गरेको थिएन । फिल्म जस्तो सुकै होस् प्राय जसो फिल्महरुले…
फिल्मी फण्डा । ४० को दशकमा फिल्म चिनोबाट चर्चा कमाएका सुनिल थापाको – ‘राते काइँलालाई यो कुरा मन परेन’, भन्ने संवादसँग निकै चर्चित रह्यो जसले थापालाई राते काँइलाको उपनाम समेत दिलायो । खलपात्रबाट रजतपटमा चर्चा कमाएका एकाध व्यक्तित्वमा पर्दछन् उनी । हिन्दी फिल्ममा काम गर्दागर्दै नेपाली फिल्ममा व्यस्त भएका थापाले त्यसपछिको समय नेपाली फिल्ममा अभिनय…
क्रेज फर्काउँदै आर्यन
फिल्मी फण्डा । चक्लेटी नायक आर्यन सिग्देल रजतपटबाट केही समय गुमनाम जस्तै भएका थिए । उनका फिल्मले गतिलो कारोबार गर्न छाडेका थिए । एक समय उनको डिमाण्ड उच्च थियो । उनको क्रेज लोभ लाग्दो थियो । तर, सँधै उस्तै अवस्था रहँदैन । विस्तारै उनको फिल्मी करियर ओरालो लाग्न थाल्यो उनको स्थानमा अन्य कलाकारहरु जमे । उनको…
प्रतिक्षित फिल्मलाई सकसै सकस
फिल्मी फण्डा । शुटिङको सिजनमा यस वर्ष कम फिल्महरु फ्लोरमा रहेका छन् । ठूला ब्यानरका फिल्महरु कम रहेका छन् । कलाकारहरुको टिम नै तय नगरि प्रदर्शनको मिति तय गरेको फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को स्टारकाष्ट छान्न भने सकस वेहोरिरहेको छ । यद्यपि स्टारकास्ट भने बलियो बन्दै गएको छ । फिल्मका यस अघिका शृङ्खला सफल छन् त्यसैले…
फिल्मी फण्डा । चलचित्र विकास बोर्डले १० जना फिल्मकर्मीलाई ‘चलचित्रकर्मी विशेष योगदान सम्मान – २०७६’ बाट सम्मानित गर्ने भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले १९औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी १० जना फिल्मकर्मीलाई सम्मान गर्न लागेका हुन् । वि.सं. २०५७ साल असार १६ गते स्थापना भएको चलचित्र विकास बोर्डले हरेक वर्ष १६ असारलाई आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै…
फिल्मकर्मी नरेन्द्र मर्हजनलाई पितृशोक
फिल्मी फण्डा । फिल्मकर्मी नरेन्द्र मर्हजनलाई पितृशोक परेको छ । नरेन्द्रका पिता नन्द बहादूर मर्हजनको ७८ वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएको हो । लामो समय देखि बिरामी रहनुभएका नन्द बहादूर मर्हजनको कीर्तिपूरस्थित निवासमा निधन भएको हो । फिल्मकर्मी नरेन्द्र मर्हजन चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य समेत रहेका छन् । उनी फिल्म वितरण कम्पनी एफ.डिका अध्यक्ष समेत…
फ्लपमा ह्याट्रिक नहोस् है
फिल्मी फण्डा । नायिका शिल्पा मास्के अभिनित दुई फिल्म,‘द ब्रेकअप’ र ‘कागजपत्र’ प्रदर्शनमा आइसकेका छन् । दुवै फिल्मले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । दुवै फिल्म फ्लप भए । शिल्पा रजतपटको बारेमा धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । हलबाट टाढिएका दर्शकलाई कन्टेन्टमा फोकस हुँदै फिल्म निर्माण गर्न सकियो भने हलसम्म तान्न सकिने उपाय सुझाउँछिन् ।…
फिल्ममा गीत चोरीको रुपरेखा
फिल्मी फण्डा । अहिले प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी…’ बोलको गीत निकै चर्चित छ । यो गीत नसुन्ने सायदै होलान् ! १५ दिनमै युट्युबमा एक करोड भ्युज बटुलेर यो गीतले नयाँ रेकर्ड राख्यो । तर यस गीतलाई चोरीको आरोप लागेको छ । उक्त ओरिजिनल गीत हो, ‘आऊ नाचौँ साथी हो…’ पुराना सर्जक शम्भु राईको गीतसँग मेल खाए पछि…
शिवरात्रीलाई टार्गेट गर्दै फ्लोरमा “लप्पन छप्पन २”
फिल्मी फण्डा । गत बर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म “लप्पन छप्पन” को सिक्वेल “लप्पन छप्पन २” बन्ने भएको छ । बुधबार कमलादीस्थित गणेशस्थान मन्दिरमा फिल्मको शुभ मुहूर्त सम्पन्न भएको छ । शुभ मुहूर्त समारोहमा फिल्मका निर्माता र निर्देशकदेखि कलाकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । निर्देशक मुकुन्द भट्टसहित अभिनेता अर्पण थापा, अनुपबिक्रम शाही, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ, क्यारोलिन कोलिन्डा,…
फिल्मी फण्डा । फिल्म खेल्न थालेको चार वर्ष बित्दा पनि नायक पुष्प खड्काको करिअरले लोभलाग्दो गति पक्रेको छैन । उनको डेब्यु फिल्म अझै पनि कतिखेर लाग्यो कतिखेर हलबाट उत्र्यो पत्तै भएन । फिल्ममा उनको सहायक भूमिका रहेको थियो । त्यस्तै अर्को फिल्म दर्पणछायाँ २ मा उनको मुख्य भूमिका थियो, तर न फिल्मले दाम कमायो, न…